Soo hel Hyundai i30 cusub Ragga Stylish
Markaan cusbooneysiineyno gaarigayaga, waa inaan tixgelinno arrimo badan, laakiin tan ugu weyn oo dhan iyo tan culeyska badankeedu yahay waa isticmaalka aan u qoondeynayno helitaanka. Sida caadiga ah, tiro badan oo isticmaaleyaal ah ayaa u adeegsan doona sidii gaadiid ay ku aadaan shaqada. Haddii aan nasiibno ama nasiib darro, waxay kuxirantahay sida aad u aragto, inaan ka shaqeyno magaalo weyn, waxaa ugu wanaagsan in la helo gaari isku dhafan laakiin taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan qaadano dhamaan xubnaha qoyska oo raro jirridda markaan iibsaneyno.
Xaaladdan oo kale, Hyundai i30 cusub ayaa noqon karta xulashada ugu habboon. Sida kii kahoreeyay, Hyundai's i30 cusub wuxuu na siinayaa silhouette qaabeysan oo taabasho leh xarrago iyo casriyeyn, taas, aan wajahno, way adagtahay in laga helo suuqa baabuurta maanta. Intaa waxaa sii dheer, taabashada shaqsiyadeed ee nalalka maalinlaha ah ee LED-ka, oo dhammaan soo saarayaasha aysan aqoon sida loo isticmaalo qurxinta gawaarida, waxay ku dareysaa taabasho dhameystiran oo dhameystiran.
1 Matoorro cusub
2 Xarunta warbaahinta
3 Amniga ka hor wax walba
4 Hyundai i30 Daahfurka Edition
Daahfurka i30 cusub ayaa sidoo kale calaamad u ah imaatinka suuqa ee makiinado shidaal oo cusub oo turbocharged leh oo leh xawaare 7-xawaare ah oo laba-xajin ah, oo keenaya xawaare isboorti Haddii aan ka hadalno matoorada shidaalka, i30 wuxuu na siiyaa 1.4 T-GDI oo leh 140 hp iyo 1.0 T-GDI oo leh 120 hp. Laakiin waxaan sidoo kale ku raaxeysan karnaa matoorada naaftada CRDI ee 95, 110 iyo 136 hp. Sidaan arki karno, Hyundai i30 cusub wuxuu noo soo bandhigayaa makiinado dhamaan dhadhanka iyo baahiyaha isticmaaleyaasha.
Dhammaan moodooyinka waxaa ka mid ah gudbinta gacanta oo lix-xawaare ah, laakiin keliya matoorada aasaasiga ah ee 1.0 T-GDI ee naaftada 95-hp laguma xidhi karo sanduuqa tooska ah. Laakiin ay weheliso matoorada cusub, shirkaddu sidoo kale ayaa ka shaqeysay yareynta miisaanka iyo isticmaalka labadaba adeegsiga bir bir adag u adkaysta qaabka cusub ee qaabkan. Isticmaalka birta, oo qayb ka ah 53% dhismaha, waxay ku guuleysatay inay yareyso qiimaha gaariga 28 kg.
In muddo ah hadda, mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee baabuurta cusub waxay la xiriirtaa isku xirnaanta, isku xirnaanta taas oo noqon karta mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dadka isticmaala qaarkood u iibsadaan gaari cusub. Hyundai i30 ayaa na siisa nidaam 8-inch isku-dhafan isku-dhafan oo sabeeya, halkaas oo aan ku raaxeysan karno biraawsarka, macluumaadka iyo firaaqada si isku mid ah.
Sidoo kale, Tikniyoolajiyadda AirPlay ee Apple iyo Google Auto ee Google ayaa noo oggolaanaya inaan ku xirno Smartphone-keena xarunta multimedia inaad awood u yeelatid inaad ku dheesho muusikada aan jecel nahay iyo sidoo kale inaad dirto fariimo, wicitaano sameyso, aqriso fariimaheena ... dhamaan codadka.
Amniga ka hor wax walba
en el qaybta badbaadada, Hyundai i30 cusub wuxuu na siiyaa Nidaamka Digniinta Darawalka (DAA) ee lagu ogaado daalka iyo feejignaan la'aanta, isagoo darawalnimada ugu digaya digniinta muuqaalka iyo acoustic. Nidaamka Feejignaanta Degdegga ah ee Aaladda (AEB) kaas oo lagu dabaqo awoodda ugu badan ee bareegga haddii ay dhacdo shil suurtagal ah oo ah lugeyn ama gaari kale ama shay.
Xakamaynta Cruise Control (ASCC) in joogtee masaafad aamin ah markasta gaadhiga inaga horeeya. I30-ka cusub waxaan sidoo kale leenahay nidaamka ogaanshaha indha la'aanta oo nooga digaya joogitaanka muraayadaha meesha indho la'aanta ah marka aan rabno inaan dhaafno.
Hyundai i30 Daahfurka Edition
In loo dabaaldego daahfurka i30 cusub, kaas oo waxay ku soo beegmaysaa sannad-guuradii tobnaad ee ka soo wareegtay markii la bilaabay moodelkan oo waxay u taagan tahay jiilka saddexaad ee gaadhigan is haysta ee ka socda soo-saaraha Kuuriya, waxaan ka heli karnaa daabacaadda soo-saarista gaarka ah dhammaan qalabka heerka koowaad ah, giraangiraha isku-dhejiska ah ee 16-inji ah, qaboojiye laba-aag ah, shaashad midab leh oo 5-inji ah Goob gawaarida la dhigto oo lagu daro Hyundai Safety Pack oo ay kujiraan biriga degdega ah ee degdega ah, nidaamka digniinta shilalka kahor, nidaamka bixitaanka haadka firfircoon, qalabka dareeraha daalka, laydhadhka sare, dareeraha nalka tooska ah iyo xakamaynta safarka.
Tan iyo markii ay timid suuqa, Hyundai waxay in ka badan 800.000 i30s gelisay wareega Yurub oo dhan, laga soo bilaabo labadii fac ee hore. Noocaan cusub, Hyundai wuxuu rabaa inuu sii wado inuu noqdo bartilmaameedka adduunka ee gawaarida iswada. Haddii aad ka fikirayso in taadu qaraabo tahay, The I30 Wagen waxaa amaah lagu siin doonaa Geneva Motor Show ee soo socota, oo waxay imaan doontaa goobo ganacsi bilo yar kadib dhammaan kuwa xiiseynaya qaabka qoyska ee heshiiskan cajiibka ah ee ka socda shirkadda Kuuriya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Soo hel Hyundai i30 cusub
Moodada dariiqa - ninka dharka gashan